Otu esi etinye Python 3.10 na Linux Mint 20 - LinuxCapable
Otu esi etinye Python 3.10 na Linux Mint 20
Sunday, Jenụwarị 9, 2022 Monday, October 25, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1. Python 3.10 na APT Package Manager
Nhọrọ - Na-ewu abalị
Wụnye Python 3.10 site na nchịkọta isi iyi
Mepụta Gburugburu Ebe Obibi Ule
Python bụ otu n'ime asụsụ kachasị ewu ewu na ọkwa dị elu, na-elekwasị anya na ọkwa dị elu yana ngwa dabere na ihe sitere na mpempe akwụkwọ dị mfe gaa na algọridim mmụta igwe dị mgbagwoju anya. Ụfọdụ atụmatụ Python nwere ike ime:
Enwere ike iji Python na sava wee mepụta ngwa webụ.
Enwere ike iji Python n'akụkụ ngwanrọ mepụta usoro ọrụ.
Python nwere ike jikọọ na sistemụ nchekwa data. Ọ nwekwara ike ịgụ na gbanwee faịlụ.
Enwere ike iji Python jikwaa nnukwu data ma rụọ mgbakọ na mwepụ dị mgbagwoju anya.
Enwere ike iji Python maka imepụta ngwa ngwa ma ọ bụ mmepe ngwanrọ dị njikere.
Maka ndị ọrụ yana ọkachasị ndị mmepe chọrọ ịnwale ntọhapụ ọhụrụ Python, ị ga-ama ka esi etinye Python 3.10 firm ọhụrụ na nkuzi na-esonụ.
Ịwụnye ụdị Python 3.10 kachasị ọhụrụ bụ usoro kwụ ọtọ, ekele maka PPA omenala. Iji wụnye na ịnata mmelite na-aga n'ihu maka njirimara ọhụrụ, ndozi ahụhụ, yana mmelite nchekwa dị egwu, ị ga-agbakwunye ya (agwọ anwụ/ppa).
Nke mbụ, wụnye ihe achọrọ maka ịgbakwunye PPA omenala:
Nke abụọ, tinye ya (agwọ anwụ/ppa) na ndepụta isi mmalite njikwa ngwugwu APT gị:
Ugbu a ị gbakwunyela ebe nchekwa ahụ, megharịa ndepụta isi mmalite APT gị.
Ozugbo etinyere ebe nchekwa ahụ, ị ​​nwere ike tinye Python 3.10 ugbu a site na ime koodu a:
Ị ga-ahụ ngwungwu ndị a arụnyere na ntinye gị:
Iji nyochaa nrụnye na ụdị nrụpụta Python 3.10, mee ihe ndị a:
Mara, ụdị a ga-agbanwe n'oge bụ naanị ọmụmaatụ.
Nhọrọ, ị nwere ike iwunye mgbakwunye ndị a.
Ka ịwụnye nkụnye eji isi mee maka iwu ndọtị C:
Iji tinye modul ọba akwụkwọ ọkọlọtọ (venv):
Iji wụnye modul ọba akwụkwọ (distutils).:
Iji wụnye akụrụngwa (2to3.11) yana ọkọlọtọ ọba akwụkwọ (lib2to3) modul:
Ka ịwụnye modul ọba akwụkwọ (dbm.gnu).:
Iji wụnye modul ọba akwụkwọ (tkinter).:
Maka ndị mmepe chọrọ ihe nrụpụta abalị kacha ọhụrụ, PPA nwere alaka ọzọ maka ihe owuwu ndị a. Otú ọ dị, ọ bụ naanị ndị ọkachamara na ndị mmepe chọrọ iji ihe ndị dị otú ahụ na-ewu ụlọ kwesịrị iji ha.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere ndabara 3.10 kwụsiri ike site (agwọ anwụ/ppa), ị nwere ike ịme iwu mmelite dabara adaba iji kwalite ngwugwu ndị dị adị.
Mgbe ahụ kwalite ngwugwu:
Ọ bụrụ na ị nweghị Python arụnyere, jiri iwu nwụnye.
Cheta ka ị na-emelite oge niile dịka nke a bụ ụdị ewu abalị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụgharị azụ na PPA kwụsiri ike. Nke mbụ, wepụ Python 3.10.
Na-esote, wepụ PPA arụ ọrụ abalị.
Ozugbo emechara, melite ndepụta nchekwa APT iji gosipụta mwepụta ahụ.
Ugbu a tinyegharịa Python 3.10; ị nwere ike ịtinye PPA kwụsiri ike ma ọ bụrụ na i wepụrụ ya. Ị nwere ike ịgbanwee n'etiti nsụgharị na-eme nke a. Agbanyeghị, a ga-adụ ọdụ ka ịtọlite ​​​​gburugburu mebere ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọtụtụ gburugburu.
Nhọrọ ọzọ maka ndị na-eche ihe ịma aka karịa ma ọ bụ chọrọ ihe nrụpụta dị elu sitere na ebe nchekwa git nke isi iyi nwere ike ịhọrọ ịwụnye ozugbo site na isi mmalite. Isi okwu na usoro a bụ na ị nweghị ike imelite ngwa ngwa dị ka onye njikwa ngwugwu APT na ọ ga-adị mkpa ka ị chịkọtaghachi maka mgbanwe ọ bụla.
Nke mbụ, ị ga-achọ ịwụnye ihe ndabere dị mkpa iji wuo Python 3.10:
Akụkụ nke abụọ na-eleta ibe nbudata na webụsaịtị Python wee nweta ụdị kachasị ọhụrụ site na iji (wget):
Nke a bụ Python 3.10 ụdị kwụsiri ike; gaa na lelee maka mmelite.
Ebe nchekwa faịlụ dị obere, yabụ na ọ gaghị ewe oge iji budata ya. Ozugbo emechara, wepụ ihe ndekọ ahụ:
Ị ga-achọ ịgbanwe gaa na akwụkwọ ndekọ aha ma na-agba ọsọ nhazi nhazi, nke na-eme ihe dị mkpa na-agba ọsọ-site na ndepụta nlele iji hụ na ndabere niile dị maka nrụnye na-arụ ọrụ.
Mara, na (-nkwalite-nkwalite) akwadoro ka ọ na-ebuli ọnụọgụ abụọ Eke Ọgba site n'ịgba ọtụtụ ule mana ọ na-ewekwu oge iji asọmpi.
N'ozuzu usoro a kwesịrị iwere nkeji ole na ole, ya mere a na-atụ aro ka ị ghara ịwụ.
Nhọrọ ọzọ bụ iji (mee) iwu ka ịmalite usoro iwu.
Mara, na (-j) dabara na ọnụọgụ cores dị na sistemụ gị iji mee ka oge nrụpụta dị ngwa. Ọ bụrụ na ị nwere ihe nkesa dị ike, ị nwere ike ịtọ nke a dị elu dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na i meghị, ọ ga-abụ nhọrọ ndabara nke 1. Iji chọpụta ọnụọgụ cores ị nwere na sistemụ gị, mebie koodu a:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, anyị nwere abụọ cores, otú na (mee) iwu, anyị na-eji (-j 2).
Na nzọụkwụ ikpeazụ, ozugbo ịmechara usoro iwu, ị ga-etinye Python 3.10 isi iyi site na ime ihe ndị a:
Mara, ntuziaka ejirila (altinstall) kama ndabara (wụnye) n'ihi na ọ ga-edegharị faịlụ ọnụọgụ abụọ python3 nke ndabara /usr/bin/python.
Lelee ụdị nrụnye ahụ ka ị hụ na etinyere ya nke ọma yana nọmba ihe nrụpụta ya ugbu a:
Python's venv modul bụ ebe a na-ahụ anya bụ ebe Python dị ka onye ntụgharị Python, ọba akwụkwọ, na script etinyere n'ime ya dịpụrụ adịpụ site na ndị e hibere na mpaghara ndị ọzọ mebere, na (na ndabara) ọba akwụkwọ ọ bụla arụnyere na sistemụ arụmọrụ gị, dịka ọmụmaatụ, ndị arụnyere na sistemụ arụmọrụ Linux Mint gị ka ịzenarị esemokwu na ịkpaghasị gburugburu ebe nrụpụta gị.
Iji hụ na etinyere Python 3.10 nke ọma ma na-arụ ọrụ, mepụta ọrụ Python ngwa ngwa.
Mbụ, mepụta ndekọ ọrụ wee gaa na ya:
Ugbu a n'ime ndekọ ndekọ mgbọrọgwụ ọrụ, mee iwu na-esonụ ka ịmepụta gburugburu ebe obibi, maka ule aha ya test_app:
Mara, nrụnye a chịkọtara gụnyere venv. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị wụnye usoro njikwa ngwugwu APT, ị nwere ike ịwụnye ngwugwu venv ma ọ bụrụ na ị zutere nsogbu.
Na-esote, rụọ ọrụ mebere gburugburu dị ka ndị a:
Mgbe ịmalitechara gburugburu ebe obibi, ị ga-anọ ugbu a na ọdụ ozugbo ozugbo. Ị ga-achọpụta na a ga-etinyerịrị aha gburugburu gị.
Site na ndabara, PIP3.10 kwesịrị ịwụnye, onye njikwa ngwugwu kacha eji maka Python.
Tupu ịmalite, lelee ma ọ bụrụ nkwalite ọ bụla dị maka PIP.
N'ime nkuzi iji nwalee nrụnye, Apache-Airflow etinyere.
Wepu ngwa ule site na iji PIP3.10.
Iji pụọ na mebere gburugburu, jiri iwu a:
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Python 3.10 na Linux Mint 20 site na iji ụzọ dị iche iche na PPA site na Snakeyes ma ọ bụ iji chịkọta site na isi iyi wee mụta ka esi emepụta gburugburu ebe obibi ngwa ngwa.
N'ozuzu, Python 3.10 ka dị mma, yabụ ịrapara na Python 3.9 nwere ike bụrụ ihe na-achọsi ike maka oge a. Maka ndị chọrọ ịnwale Python ọhụrụ, 3.10 kwesịrị itinye ego iji wụnye.
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux, Python Mail igodo
Otu esi etinye Mono Framework na Linux Mint 20
Otu esi etinye Nvidia 495.xx Drivers na Linux Mint 20
Mọnde, Nọvemba 15, 2021 5:19 nke ụtụtụ
kedu ka esi emeghe Python?
Tuzdee, Nọvemba 16, 2021 10:41 nke ụtụtụ
Ndewo James, daalụ maka ozi ahụ.
Ekwenyere m na ị ga-achọ pịnye na njedebe python3.10
Ihe atụ sitere na ọdụ m.
joshua @ isi-pc: ~ $ python3.10
Python 3.10.0 (ndabere, Ọktoba 11 2021, 05:33:59) [GCC 11.2.0] na Linux
Pịnye "enyemaka", "nwebisiinka", "Ebe e si nweta" ma ọ bụ "ikike" maka ozi ndị ọzọ.
wee pụọ () ka ịpụ na python 3.10 shei.
Ọ gwụla ma m ghọtahiere gị.
Mọnde, Disemba 27, 2021 9:13 nke ụtụtụ
sudo add-apt-repository ppa: deadsnakes/ppa -y
Enweghị ike ibubata ihe nkesa: Enweghị ike ijikọ: Njikọ jụrụ
Mọnde, Disemba 27, 2021 9:39 nke ụtụtụ
Ndewo Michael, daalụ maka ozi ahụ.
Nke a dị ka esemokwu dị n'etiti njedebe gị na ihe nkesa, ọ nwere ike ịbụ okwu ntụgharị ma ọ bụ ọbụna njedebe ebe nchekwa.
Mụ onwe m nwalere ya ngwa ngwa na ntinye Linux Mint ọhụrụ, na-arụ ọrụ nke ọma na njedebe m, ma ebe nchekwa ọkọlọtọ na PPA abalị.
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.80KJr8B96p/gpg.1.sh –keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com:443 –recv-keys F23C5A6CF475977595C89F51BA6932366A755776
gpg: igodo BA6932366A755776: igodo ọha "Launchpad PPA maka agwọ nwụrụ anwụ" ebubatara
gpg: Onu ogugu haputara: 1
gpg: abata: 1
Ị nọ n'azụ onye nnọchiteanya ma ọ bụ ihe ọ bụla? Nke ahụ nwere ike ịbụ okwu.